Raadkii afgambigii Sabtidii ayaa wali saamayntiisa dalka oo dhan laga dareemaya – Xeernews24
Raadkii afgambigii Sabtidii ayaa wali saamayntiisa dalka oo dhan laga dareemaya
24. Juni 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
Raadkii afgambigii Sabtidii ayaa wali saamayntiisa dalka oo dhan laga dareemaya iyada oo xogaha dhacdada ku saabsan is badalayaan. Dawlada ayaa xogo cusub soo bandhigtayay. Waxaa la dilay hogaamiyihii afgambiga, waxaa dhaawicii soo gaadhay u dhintay xeer-ilaaliyahii guud ee gobolka Axmaarada, waxaa kale oo hadda la sheegaya in askarigii ilaalada u ahaa taliyaha ciidamada qaranka uu is dilay kadib markii uu toogtay taliyaha iyo jeneral kale, oo hawlgab ahaa, laakiin markaa la joogay Seare Mokennon. Dawlada ayaa horay u sheegtay in ilaaladii dilka geystay la qabtay
Waxaa kale oo soo baxaya xogo tilmaamaya in shirkii ay ku jireen madaxda maamulka gobolka Axmaaradu lagaga xaajoonayay sidii talaabo looga qaadi lahaa madaxa xafiiska nabadgalyada ee gobolka, Asamanew Tsige, oo ah qofka dusha loo saaray mashaqada dhacday.
Tsige, oo ku jiray saraakiil kal hore la sii daayay, ayuu maamulka Axmaaradu u magaacabay xil sare si xirfadiisa looga faa’iideysto iyo malaha si TPLF looga cadhaysiiyo. Tsige ayaa loo magaacabay madaxa nabadgalyada, halka Mamo Tefera oo isna horay u xidhna loo magaacabay madaxa ciidamada gaarka ah.
Asamanew Tsige ayaa ahaa nin mayal adag oo xagjir ah islamarkaana cadaawad iyo nacayb xoog leh u hayay maamulka Tigreega. Wuxuu bilaabay inuu qoro dhalinyaro ay ku xoog badan tahay aragtida Axmaarnimadu. Wuxuu si aan gabasho lahayn u dhiirigaliyay in qoomiyada Axmaaradu aad isu hubayso; loona tabaabushaysto dagaal qoomiyadaha kale lala galo.
Axmaarada, oo ah qoomiyad 2aad ee dalka ugu tiro badan, ayaa ciil iyo cadho gaamurtay u qaba Tigreega oo intii ay talada hayeen dhib badan ay ka tirsanayaan. Waxaa muragadooda sii kordhiyay markii Axmaaro badan laga soo qixiyay goobo badan oo dalka ah taaso xitaa dhalisay in Axmaarada xagjirka ahi xukuumada Abiy mucaarid ku noqdaan.
Xubno badan oo maamulka Axmaarada ah ayaa qabay in dhibaatada la tirsanayo si miyir qab ah loola taacalo iyada oo xukuumada Abiy lala shaqaynayo. Ismaandhaafkaas ayaa loo aanaynaya inay xaaladu cirka isku shareerto.
Madax maamulka Tigreega, Debretsion Gebrimachael, ayaa shalay sheegay in afgambiga dhicisoobay iyo dilka taliyihii ciidamada qaranku isku xidhan yihiin islamarkaana mar hore la qorsheeyay. Debretsion ayaa sheegay inay dilal kale dhacayaan isaga oo tilmaamay in ujeedada ka danbeysa falalkan ahayd in dawlada federaalka ah xukunka laga tuuro. Wuxuu intaa ku daray, in Seare Mokennon loo dilay masuuliyadiisa darteed. Labada jenaraal ee la dilay ayaa kasoo jeeda qoomiyada Tigreega.
Ciidamo tiro badan ayaa lasoo tuulay Bahir Dar iyo Addis Ababa; xaaladuna waxay u muuqata inay hadda yar degan tahay.
Tartanka u dhaxeeya qoomiyadaha waaweyn ee dalka ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya, oo haddii aan la xakaymayn, xadhkaha goosan kara. Waxaa loo baratamaya awoodaha dalka iyo maamulida khayraadka. Waxaa kale oon la dhayalsan karin qoomiyadaha kale oo ay fursadi u muuqato.
Nidaamkii hore ayaa maamul kasta u abuuray ciidamo gaar ah oo intii isbadalku yimid sii awoodaystay. Awoodaha ciidamada gaarka ah waxaa aad looga dareemaya gobolada Tigreega iyo Axmaarada.
Su’aalo badan ayaa wali u baahan jawaabo buuxa. Maxay noqon lahayd talaabada kale ee Tsige qaadi lahaa hadii uu guuleysto? Sideebu taliyaha ciidanku gurigiisa uga hagi kara hawsha lagu fashilinayay afgambiga xilli oo waliba la joogay sarkaal hawlgab ah oo ay saaxiib yihiin? Ayay ahaayeen ilaalada gaarka ah ee taliyuhu, ma kuwo joogto ah ayay ahaayeen mise wey cusbaayeen? Waa maxay xidhiidhka ka dhaxayn kara hogaamiyaha afgambiga iyo ilaalada taliyaha la dilay? Maxaa sababay in xogaha dawladu aad isu bad-badalaan? Isku dayga afgambigu ma abuuri karaa shaki hor leh oo qoomiyadaha waaweyn soo dhaxgala? Maxaa afgambiga kusoo beegay sanad guradii dilkii uu Abiy ka badbaaday kalhore oo shalay ku beegnayd? Ugu danbayn, Ethiopia mustaqbal noocee ah ayey leedahay?
Waxaa suurtagal ah in xogo kale oo hadda qarsoon soo baxaan saacadaha ama maalmaha soo socda, laakiin waxaa hubaal in dalku ku jiro xaalad kakkan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/faalo-gaaban-230x130.jpg 130 230 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-06-24 22:28:452019-06-24 22:28:45Raadkii afgambigii Sabtidii ayaa wali saamayntiisa dalka oo dhan laga dareemaya
Sacuudiga oo maamulka Somaliland ku qasbay in warqad kasoo qaadato dowlada ... Daawo;Qurba joogta Gobolka Sitti ee wadanka Sweden oo ka hadlay xaaladda Go...